प्रधानमन्त्री ओली र देउवाको बालुवाटारमा तीन घण्टाको छलफल, के के भए कुरा ? – Janapriyakhabar
प्रधानमन्त्री ओली र देउवाको बालुवाटारमा तीन घण्टाको छलफल, के के भए कुरा ?
काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अब विधेयक ल्याउँदा दलहरुबीच छलफल गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन्। आइतबार साँझ नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालगायत नेतासँगको भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो प्रतिवद्धता जनाएका हुन्।
ओलीले देउवासँग हरेक विधेयक ल्याउँदा दलहरूसँग परामर्श गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन्। यसबीच पार्टी एकतामा आफूले बढ्ता ध्यानदिनुपर्ने भएका कारण दलहरूबीच भेटघाट पातलिएको ओलीको भनाइ थियो। ‘हामीले ल्याएको व्यवस्थाको रक्षा र संविधानको कार्यान्वयनका लागि दलहरू मिलेरै जानुपर्छ’, प्रधानमन्त्रीलाई उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो।
प्रधानमन्त्री ओलीले बाँके घटनामा संलग्न जो कोही भए पनि कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। ‘घटनाका दोषीलाई कारबही हुन्छ। यसका लागि हामी मानसिक रूपमा तयार छौँ’, ओलीले भने, ‘पीडित पक्षको जाहेरी प्रशासनले लिन्छ। सदनका गतिविधि सुचारु हुन दिनुहोस्।’
करिब तीन घण्टा भएको छलफलमा पछिल्लो समय सरकारले आफूखुसी निर्णय गरेको भन्दै असन्तुष्टि प्रकट गरेका थिए। कांग्रेस नेताहरूले सरकारले ल्याएका कतिपय विधेयक संघीय गणतन्त्रको मर्मविपरीत भएको भन्दै सच्याउन माग गरेका थिए। देशमा शान्ति सुरक्षा खस्किँदै गएको प्रसंग पनि उठाए।
‘सत्तापक्षले जनतामा निराशा जगाउने काम मात्रै गर्‍यो’, प्रधानमन्त्रीसमक्ष सभापति देउवाले भने, ‘यसले सबै राजनीतिक दललाई नकारात्मक प्रभाव पार्छ। व्यवस्थामाथि पनि खतरा पैदा गर्छ।’ सर्वसाधारण र प्रेसका अधिकार कुण्ठित गर्ने गरी विधेयक ल्याइएकामा उनले सरकारको कडा आलोचना गरेका थिए। भूमि, मिडिया काउन्सि, सूचना प्रविधि, मानव अधिकारलगायत विधेयक संविधानको मर्मअनुसार नभएको उनको भनाइ थियो।
कांग्रेसका नेताले जागरण अभियानका क्रममा नेकपा नेताले आफ्ना कार्यकर्तामाथि आक्रमण गरेको विषयलाई पनि गम्भीरतापूर्वक उठाएका थिए। प्रधानमन्त्रीसँग समय मागेर बालुवाटार पुगेका उनीहरूले घटनाका दोषीलाई कारबाहीको माग गरे। कांग्रेसले संविधानको मर्मअनुसार प्रदेश सरकारले काम गर्न नपाएको भन्दै प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको थियो।
भदौ ३ गतेको सर्वदलीय बैठकपछिको संवादहीनता तोड्दै कांग्रेसका शीर्ष नेतासँग प्रधानमन्त्री ओलीले भेटवार्ता गरेका हुन्। प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न सभापति देउवा, पौडेलसहति नेताहरू कृष्णप्रसाद सिटौला, शशांक कोइराला, पूर्णबहादुर खड्का, प्रकाशशरण महत, सीतादेवी यादव, विश्वप्रकाश शर्मालगायत पुगेका थिए।